विवाह बारेको प्रश्न गर्दा चर्चित नायिका केकी अधिकारीको जवाफले पत्रकार यसरि चकित ! – News Kalika
काठमाडौं । केकी अधिकारी उनी निरन्तर चलचित्रमा व्यस्त छिन् । उनी अभिनित चलचित्रले सन्तोषजनक व्यापार गरिरहेका छन् । नायिका केकी अधिकारीको बिहे चर्चा पनि चलचित्र बजारमा चल्न थालेको छ ।
विवाहबारे प्रश्न राख्दा उनले अहिले आफूले साथीहरुको बिहे हेरेर आफ्नो तयारी गरिरहेको बताएकी छिन । कसरी बस्नुपर्छ, के गर्नु पर्दोरहेछ भन्ने सिकिरहेको उनले जवाफ फर्कइन् ।यो सुनेर पत्रकार परे चकित।
Previous Postएक बाबुले घोषणा गरे छोरीसँग बिवाह गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम दिने पुरा विवरण सहित हेर्नुहोस
Next Postयी हुन् प्रेममा कहिल्यै धोका नदिने ५ राशिका युवती (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
चर्चित गायिका अञ्जु पन्तले आफ्नि छोरीको अनुरोधमा विवाह गर्दै, सार्वजनिक गरिन आफ्नो हुनेवाला श्रीमान !
kalika 12:07 pm
जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढ्नुहोला ! साथिलाइ तु शेयर गर्नुहोला!
kalika 12:55 pm
यी हुन् आफ्नै निजि जहाज चढ्ने ६ अभिनेत्रीहरु…..(हेर्नुहोस पुरा विवरण)
kalika 11:23 am
नायिका स्वस्तिमा खड्काको बारेमा रोचक तथ्य, सार्वजनिक भए यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता…..(तस्बिर सहित)
kalika 2:57 pm